प्रमुख समाचार पान चपाएर भट्टीमा थुक्ने नेतामाथि प्रहार हेटौंडा । मकवानपुरका नेता यतिखेर पार्टी जोगाउने ध्याउन्नमा छन् । पुरानै घाउ भित्रभित्रै पाक्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसको नेविसंघमा जसोतसो समस्या मिलान गरिएको छ । विवादित अर्काे संगठन तरुण दल पनि विवादको भुमरीबाट बाहिरिने प्रयासस्वरूप सुनील दाहाललाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएर पुनर्गठन गरिएको छ । यसअघि देउवा कांग्रेस र कोइराला कांग्रेस मिलेदेखि नै मकवानपुरमा दुईवटा तरुण दल थियो । यता, तत्कालीन देशकै ठूलो पार्टी बनेको एमाओवादी पनि कार्यकर्ता ड्यास माओवादीले लैजाला भनेर जोगाउने अभियानमा छ । यो अभियानको नेतृत्व जिल्ला इन्चार्ज सोनामसिंह स्याङ्तान विजय, सह�इन्चार्ज प्रेमबहादुर पुलामी छिन्तु र सहसेक्रेटरी बलराम बलले गरिरहेका छन् । तर, यी नेतालाई ड्यासवालास�ग भन्दा पनि आ�नैस�ग डराउनुपर्ने अवस्था छ । विजय बाबुरामपक्षीय सरकारी माओवादीपट्टिका हुन् भने छिन्तु र बल प्रचण्डपक्षीय हुन् ।
स्रोतका अनुसार यसपटक ४ नं. निर्वाचन क्षेत्रको मनहरीमा पार्टी अभियानमा पुगेका संस्थापन भनिएका यी नेताभित्रै मारामारको स्थिति आयो । बलले जसोतसो जम्मा भएका कार्यकर्तामाझ नेतृत्वले आफूलाई कार्यकर्तामाझ आउने वातावरण सिर्जना नगरेको आरोप लगाए । तत्कालीन जनमोर्चाबाट संविधानसभामा ४ नं. क्षेत्रको उम्मेदवारसमेत रहेका बलले यसो भन्नेबित्तिकै क्षेत्रीय इन्चार्ज (बाबुरामपक्ष)ले पान चपाउ�दै जहा� पायो त्यही� थुक्ने र अधिकांश रक्सीभट्टीमा भेटिने नेताले कार्यकर्तामाझ आउन नसक्नुमा नेतृत्वलाई दोष दिनु हास्यास्पद भन्दै हंगामा मच्चाइदिए । उता, अभियानकै क्रममा पालुङ पुगेका छिन्तुलाई पनि कार्यकर्ताले बहिष्कार गरेको खबर छ । उनी त्यस क्षेत्रका निर्वाचित पूर्वसभासद् हुन् ।
यता, जनजातिको छुट्टै पार्टी बनाउने अभियानका नाइके एमाले मकवानपुर इन्चार्ज तथा केन्द्रीय सदस्य वीरबहादुर लामाले जिल्ला प्रशिक्षणमा आएर रडाको मच्चाएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समेत नजाने लामा पूर्व जाने बस छुटेपछि जिल्ला प्रशिक्षणमा अचानक आइपुगेका थिए । उनले पार्टीले जातीय सवालमा निर्णयको गलत व्याख्या गरेको भन्दै कार्यकर्तामाझ धारणा राखे । जिल्ला अध्यक्ष रामेश्वर रानाले उनको भाषणप्रति कटाक्ष गर्दै माथिका नेताले आफूलाई सिकाओस् भन्ने आशा राखेको र उल्टै लामाहरूलाई सिकाउनुपर्ने आ�नो हैसियत नभए पनि बाध्यता आएको बताउ�दा कार्यकर्ता मुसुमुसु हा�सेका थिए । गाउ�बाट जनजाति पार्टी खोल्ने अभियान थालेका लामालाई जिल्लामा साथ दिने कार्यकर्ता भेट्न मुस्किल प�यो । र, कार्यक्रम सकिएपछि पनि उनलाई गाली गर्नेहरूको लाइन लागेको थियो । यो अवसरलाई लामाले पार्टी कार्यालयमा आई कार्यकर्तास�ग आ�नो धारणा राख्ने अन्तिम अवसर ठानिएको छ । किनकि, नया� जनजाति पार्टी बनाएपछि एमाले कार्यालयमा आइरहनु नैतिकसम्मत नहुने तर्क कार्यकर्ताको छ । सेनामा जागिर खाएको भए कर्णेल हुन्थे�, एमालेमा रहेर के पाए� भन्दै उनी कार्यकर्तामाझ उफ्रिएका थिए । उनी एमालेमा लागेर एकपटक जिल्ला सभापति, दुईपटक सांसद भइसकेका थिए भने झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा राज्यमन्त्री पाउ�दा मेरो हैसियत फुलमन्त्री हो भन्दै अस्वीकार गर्ने व्यक्ति हुन् । अशोक राई, विजय सुब्बा, रामचन्द्र झा, रघुवीर महासेठहरूले पार्टी छाड्ने धम्की दि�दा पार्टी नछाड्न दबाब दि�दै जिल्लाका युवाहरू बल्खुमा पुगेको सुनिए पनि जे कुरामा पनि लि�डेढिपी गर्ने लामालाई चाहि� जतिसक्दो पार्टी छोडाउनुपर्छ भन्दै केही व्यक्ति बल्खु पुगेको पनि मकवानपुरमा चर्चा छ । यता, एमाले नगर इन्चार्ज नवीन सिग्देलको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । उनको ठाउ�मा गोपाल श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएका छन् । उनले आफूले सक्रिय राजनीति छाडेको फेसबुकमा लेखे पनि जिल्ला कमिटी सदस्य र प्रचार विभाग प्रमुख भने कायमै छन् । ४ नं. क्षेत्रीय इन्चार्ज लालबहादुर थापा र जिल्ला सहसचिव मेम्वर लो पुन निलम्बनमा परेका छन् । पार्टी सम्पर्कमा नभएको भनिए पनि थापालाई केटीस�ग जोडेर हेरिएको छ । लो नवयुगको आर्थिक कारोबार मिलान गर्न नसकेकाले पार्टीको गिद्दे आ�खामा छन् । उद्योग व्यापार विभाग प्रमुख एकालाल श्रेष्ठको राजीनामा पनि स्वीकृत भएको छ । राजीनामा दिएका, असन्तुष्ट भएका र कारबाहीमा परेकाहरूलाई संरक्षण दिनका लागि हेटौंडामा एउटा दस्ता नै खडा भएको बुझिएको छ । त्यो दस्ताको काम कुनै पनि हालतमा आफू नेतृत्व लिन वा गर्न पनि नसक्ने र अरूको नेतृत्वलाई कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गर्ने र असफल बनाउने रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यो दस्ताको नेतृत्व वीरबहादुर लामा आफ�ैले गरेका थिए । अनेरास्ववियु अञ्चल कमिटीको विवादमा लामाले खुलेर पार्टी नेतृत्वलाई असहयोग गरे । अहिले त्यो दस्तालाई अघि बढाउनका लागि पुनः केही हनुमान जन्मेको बुझिएको छ । आगामी भदौ २२ र २३ गतेको जिल्ला अधिवेशनले अघोषित गुटबन्दी गर्ने र बेहैसियतकाहरूलाई गुटको आधारमा मिलान गर्ने कामको फरफारक गर्नेछ । जातीय अतिवादलाई पनि अधिवेशनले नै परास्त गर्नुपर्ने तर्क कार्यकर्ताको छ । प्राप्त प्रतिक्रियाहरु	(0) यसमा तपाईको प्रतिक्रिया	(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्) नाम